Godorao manify tantera-drano ny famokarana tsipika - China Xinle Hongtai tantera-drano
Asfalta manify tantera-drano ny fitaovana
Marika Name: HONGTAI
Product name: godorao hoditra manify tantera-drano ny
Fahafahana: 3million-15million metatra toradroa / taona
Asa: mpamokatra hoditra manify tantera-drano ny godorao
Machine Type: HT-8000
Color: Green / BLUE / BLACK / hafa
Main atrikasa: (L * W * H) / m: 60x (12-15) X (6-8)
90 andro eo nahazo petra-bola
Manify tantera-drano ny godorao farany no be mpampiasa amin'ny orinasa sy trano sivily, toy ny tafo, ambany rihana, kabine, tetezana, valan-javaboary, dobo filomanosana, tionelina ho tantera-drano sy ny moistureprof. Godorao dia hydrocarbon, ary noforonina ho azy avy amin'ny menaka hiteny ratsy. Izy io dia mahasoa karbaona fivarotana sy tsy hiteraka entona gazy. Ny hoditra manify dia maharitra noho izany fomba mitahiry karbaona amin'ny etỳ an-tany.
Ny fitsipika rehetra miasa dia azo zaraina ho dingana 3.
1. Mba afangaro ny godorao, fingotra vovoka, talcum vovoka, enginee menaka ary ny sasany hafa akora amin'ny alalan'ny fampifangaroana ny fiara mifono vy (tanky ny mampifangaro dia tokony hotehirizina mafana ny conduction menaka) .Ny vita mixtures azo antsoina hoe bituminous mixtures.
2. Ny bituminous mixtures ho deliveryed any coating pools.Then ny fitaovana fototra (fanamafisana) dia mifono ny bituminous mixtures.At farany, ny fanamafisana mifono dia ho rakotry ny PE sarimihetsika, na fasika, na hafa materials.At andro izany, ny godorao manify mialoha mamorona.
3. Ny vokatra vita dia ho tony ny rano sy ny rivotra, dia ho nanakodia ny autowinder.
Q1: ve mampiasa ny mpamatsy manokana ho an'ny akora?
Eny, afaka manolotra akora ho anao, na izany aza, ny mpanjifa dia afaka mividy fitaovana ondrilahy teny an-tsena.
Q2: Mandra-pahoviana no miasa fiainana ny milina?
Ny miasa ny fiainana dia ny 15 taona sy ny fiantohana ny 1 taona.
Q3: Inona no fanompoana ny teknolojia?
Aoka haniraka ny injeniera ho an'ny mpanjifa ny orinasa hanitsy mandra-milina ny
mpanjifa dia afaka miasa izy ireo.
Q4: Efa misy horonan-tsary izay afaka mahita ny tsipika mamokatra?
Eny, afaka manome lahatsary sasany manao ny mpanjifa faly.
2 mivezivezy eny Modi fied godorao Roofing
APP Modified godorao manify Production-dalana
tara Roofing Manufacturers Association
godorao Rolls Fa tsy tantera-drano
godorao Roof manify
Farany godorao tantera-drano ny hoditra manify Production-dalana
SBS Modified godorao
SBS Modified godorao Roofing
Hoditra manify tantera-drano APP Plant / farany Bitumino ...
Tara manify tantera-drano milina famokarana ...
3mm 4mm Cost-mahomby sy Hot adhesi fivarotana-tena ...
Tantera-drano ny asfalta Sheet Material milina Pr ...
SBS hoditra manify tantera-drano ny famokarana godorao L ...